October 2019 - Vanoda Zvinhu
Yedu yekuda kutsvaga mari iyi, ndaishanda ku Joburg ndiri taxi driver saka ndaipota ndichitakura vanhu manheru kusvika makuseni chaiwo. Rimwe zuva ndainge ndakaneta hangu saka told myself kuti nhasi ndirikuda kumbofara saka ndakabva ndaenda pa NewsCafe yepa Midrand, ndakanwa ndichiterera hangu music. Ndakagara hangu ndichinwa doro rangu ndakaona…
Ndinonzi Mai Brenda ndogara muHarare nemurume wangu and his young brother arikuenda kuUZ uko. Ndakasvika mumwe musi ndabva kumashops and dropped off nyama muKitchen and rushed into the bathroom to get a wet towel as it was HOT, handina kuziva kuti maive nemunhu. Ndakaita kunge ndichafa pandakavhura door…
Kutunda kwemukadzi panguva yebonde kubuditsa kwaanoita hukadzi hwake mushure mekunge tsinga dzemukati menhengo yake dzasvika pakutadza kucontainer pressure inounzwa nekunakirwa kwaanenge aita mumuviri wake nekunzwa nhengo yababa ichipinda nekubuda mukati menhengo yake.Paunotanga kubata mukadzi wako muviri wake unodaira. Anotanga kunzwa achisimudzwa mbijana-mbijana achinyura kupinda mune imwe nzvimbo izere…